Yuusuf Xaaji"Ciidammada Kenya Hadii Aysan Sugeyn Ammaanka Shacabka Na Siiya Hubka aan Iska Difaacnee Alshabaab " -
HomeWararkaYuusuf Xaaji”Ciidammada Kenya Hadii Aysan Sugeyn Ammaanka Shacabka Na Siiya Hubka aan Iska Difaacnee Alshabaab “
Yuusuf Xaaji”Ciidammada Kenya Hadii Aysan Sugeyn Ammaanka Shacabka Na Siiya Hubka aan Iska Difaacnee Alshabaab “
September 23, 2018 M.Jo Wararka 0
Qaar kamid ah hoggaamiyeyaasha kasoo jeedo maamulka Gaarisa ee gobolka Waqooy bari Kenya ayaa dhawaan kulan arrimmaha ammaanka looga hadlayo la qaatay wasiirka arrimmaha gudaha Kenya oo ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa amni darrada ka taagan deeganno ka tirsan degmada Ijaara.
Maxamed Yuusuf Xaaji oo ah sanatarka lagu soo doortay Gaarisa ayaa sheegay in Al Shabaab ay dhibaato ku hayaan deegaanka Ijaara ayna wexyeello u gaysteen shacabka iyo ciidammada.
Isagoo la hadlayay BBC-da wuxuu sheegay in laamaha ammaanka Kenya ay dhibaatada isugu jirto jirddil iyo garaac ay ku hayaan shacabka ku dhaqan Ijaara marka ay ciidammada fulinayaan howlgallada ka dhanka ah Al Shabaab.
Yuusuf Xaaji wuxuu sheegay inay jiraan dad si xun loo garaacay halka qaar kalena aanan la ogayn halka ay jiraan oo la waayay.
” Al Shabaab waxay dhaqdhaqaaq ka wadaa deegannada xudduudka ku dhaw iyo kaynta taaso in keentay in shacab aan dambi lahayn ay Shabaab dilaan , askartii oo gadoodsan ay dadka garaaceen , marka taasi waxaan aqbalayno ma ahaan, shacabka dambi ma laha, ma hubaysana, Al shabaab haddii ay shacabka soo dhex maraan kama reebi karaan, waajib wuxuu saaran yahay ciidammada oo ah inay ammaanka sugaan” ayuu yiri Yuusuf Xaaji.
Sanatarka Gaarisa ayaa dowladda ugu baaqay in sharciga lala tiigsado dadka lagu helo dambiga ah inay xiriir la leeyihiin Al Shabaab.
Wuxuu ka dhawaajiyay in sagaalka bisha nagu soo aadan ay qaban doonaan kulan looga soo arrinsanayo amniga deegannadaasi oo ay saraakiisha laamaha ammaanka Kenya kasoo qayb geli doonaan.
” Labo arrin uun mid, in askarta ay shaqayso oo ay Shabaab dhulka ka bixiyaan haddii kale ay ahayn ay naga soo guuraan oo annaga nala hubeeyo oo markaa aan is difaacno taas ayaan ka codsannay dowladda” ayuu yiri Santarka Gaarisa.
Yuusuf Xaaji wuxuu shacabka ku dhaqan Ijaara ugu baaqay in ciidammada ay kala shaqeeyaan sugidda ammaanka.
Wuxuu sheegay in dowladda ay ballan qaaday in la baari doono dhibaatada ciidammada ay u gaysteen shacabka si gacanta loogu soo dhigo saraakiisha lagu helo dambiyada.
Deeganno ka tirsan gobolka waqooy bari Kenya waxaa ka dhacay weeraro kala duwan oo ay waxyeello kasoo gaartay dad shacab ah iyo ciidammo.
Dowladda Kenya waxay howlgallo ka waddaa kaynta Boni oo la rumaysan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan kooxo ka tirsan Shabaab oo weerarro kusoo qaada deegannad ku hareeraysan halkaasi.